Dry Eye – Healthy Life Journal
သင့်အမြင်အာရုံကို ကယ်တင်ပေးနိုင်မည့် အကျင့်ကောင်းရှစ်ရပ်
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— မျက်စိအမြင်အာရုံကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အချက်တွေကို သင်မလုပ်ဆောင်မိစေဖို့ရာအတွက် လိုက်နာသင့်တဲ့ အကျင့်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) အိပ်ရာမ၀င်မီ မျက်ကပ်မှန်ချွတ်ပါ မျက်ကပ်မှန် ပုံမှန်တပ်လေ့ရှိသူတွေက ညအိပ်ရာမ၀င်ခင် မျက်ကပ်မှန်ချွတ်ဖို့ တစ်ခါတစ်ရံ မေ့လျော့နေတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ နောက်တစ်နေ့မှာ...
မျက်လုံးထဲ သဲဝင်သလို စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်ခြင်း
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— သင့်မျက်လုံးက သဲဝင်သလိုမျိုး အလွန်အမင်းခြောက်သွေ့ပြီး စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်နေပါသလား။ မျက်လုံးက ချောမွေ့အောင် မျက်ရည်ထုတ်ပေးနေပေမယ့် တစ်ခါတလေမှာ မျက်ရည်မထွက်နိုင်လောက်အောင် ခြောက်သွေ့ပြီး ပွန်းတိုက်သလို စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းခံစားနေရတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်စေတဲ့ အခြေအနေတွေကတော့- ဖုန်မှုန့် ဒါမှမဟုတ် ညစ်ညမ်းတဲ့...
—၊ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန်မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. မျက်စိခြောက်သွေ့ခြင်းအကြောင်း ရှင်းပြပေးပါ ဆရာ။ A. မျက်စိခြောက်သွေ့တယ်ဆိုတာ မျက်စိက မျက်ရည်မထွက်နိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးကို ခေါ်တာပါ။ မျက်စိမှာရှိတဲ့ အချွဲ(mucin) ထွက်တဲ့ Conjunctival...
အသက်ကြီးတဲ့အထိ မျက်စိမှာ ကျန်းမာရေးပြဿနာ မကျရောက်အောင် . . .
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. အသက်ကြီးတဲ့အထိ မျက်စိမှာ ကျန်းမာရေးပြဿနာ မကျရောက်အောင် ဘယ်လိုအချက်တွေ အဓိက လိုက်နာသင့်ပါသလဲ။ UT(FB) A. အသက်ကြီးတဲ့အခါ မျက်စိမှာ ကျန်းမာရေးပြဿနာအနေနဲ့ အဓိက ကျရောက်တတ်တာက အတွင်းတိမ်ရောဂါပါ။ အတွင်းတိမ်က...
မသက်မသာ ဖြစ်စေသည့် မျက်စိခြောက်ခြင်း (Dry Eye)
စူး ( ဆေးဝါးတက္ကသိုလ် ) တစ်နေ့လုံး အလုပ်လုပ်ပြီးချိန်မှာ မျက်စိနီတာ၊ မျက်စိစပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်တာနဲ့ တစ်ခါတလေ မျက်ရည်ပူကျတာတို့ ခံစားနေရပါသလား၊ ဒီလက္ခဏာတွေက မျက်စိခြောက်သွေ့တဲ့ အခြေအနေကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။ မျက်စိမျက်နှာပြင်မှာ အစိုဓာတ်နဲ့ စိုထိုင်းဆတို့ မရှိတာကြောင့် မျက်စိခြောက်သွေ့တတ်ပါတယ်။ မျက်စိရှေ့တစ်သျှူး ရောင်ရမ်းတာ၊...